ကော်ဖီနဲ့ မုန့် ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ ကျွေးပါမယ်ဆိုပြီး ၁၀၀၀ တောင်းတဲ့ကားကုမ္ပဏီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ကော်ဖီနဲ့ မုန့် ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ ကျွေးပါမယ်ဆိုပြီး ၁၀၀၀ တောင်းတဲ့ကားကုမ္ပဏီ
ကော်ဖီနဲ့ မုန့် ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ ကျွေးပါမယ်ဆိုပြီး ၁၀၀၀ တောင်းတဲ့ကားကုမ္ပဏီ
Posted by moonpoem on Sep 1, 2011 in Myanma News, News | 20 comments
ကားခ ၁၀၄၀၀ ထဲမှာ သွားတိုက်တံ၊ တာဝါပါပေးပါတယ်။
ယခင်က ရန်ကုန်၊ မန္တလေးကားတွေစီးရင် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူကြပါဘူး။ တစ်ချို့က ၀န်ဆောင်မှုကောင်းတယ်။
တစ်ချို့ က၀န်ဆောင်မှုမကောင်းဘူးအစားစားပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံပေးရတာချင်းတော့ အတူတူပါပဲ။
ဒီတော့ ပိုက်ဆံပေးရတာချင်းအတူတူ ကားကောင်း၊၀န်ဆောင်မှုကောင်းတာကိုပဲ လူတွေကေ၇ွးစီးတယ်။
သို့ သော်လည်း အခုနောက်ပိုင်းတော့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကားရော ၀န်ဆောင်မှုရော အတူတူလောက်ဖြစ်လာပြီး
ဟိုနေ့က သတင်းစာထဲမှာတော့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက ကြော်ငြာထားတယ်။ သူတို့ ကားစီးရင် မုန့် နဲ့ ကော်ဖီပါ ၀န်ဆောင်မှုပေးပါတယ်ဆိုပြီး တော့ပါ။
ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကားလက်မှတ်ဝယ်ဖို့ စုံစမ်းတဲ့အခါ ကျသင့်ငွေက တစ်သောင်းလေးရာကို သူတို့ ကတစ်သောင်းတစ်ထောင့်လေးရာ တောင်းပါတယ်။ ဈေးတက်တာလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။
ကော်ဖီနဲ့ မုန့် ခ ပါတဲ့လေ။ ဒါက တကယ့်ကို မဖြစ်သင့်တာပါ။ ၀န်ဆောင်မှုဆိုတာ ကားခထဲမှာ ပါပြီးသားလေ မဟုတ်လား။
အရင်က ကားခ ၁၀၄၀၀ ထဲမှာ သွားတိုက်တံ၊ တာဝါပါပေးပါတယ်။ ထားပါတော့ ကျွန်မက အရင်အတိုင်း၁၀၄၀၀ပဲ ပေးမယ်။ ကျွန်မ ကို ကော်ဖီနဲ့ မုန့် မကျွေးနဲ့ ဆိုတော့လည်း မရဘူး ။ မစားမနေရပါတဲ့။ပြီးတော့လည်း စားသောက်ဆိုင်မှာ ရပ်၇င် ထမင်းစားမှာပဲလေ
ကဲ ဘယ်နှယ့်လုပ်ကြမလဲ။ ဒါလေးတွေကိုလည်းပြုပြင်ပေးကြပါဦး။ (ဒီကုမ္ပဏီကတင်မိုးလွင်နဲ့ ကြော်ငြာထားပါတယ်။ )
ကြော်ငြာပြီးလုပ်စားတာ၊ ပြီးတော့ အတင်းအကျပ်လုပ်တာ
သူတို့လုပ်တာ ပရိုမိုးရှင်းမဟုတ်ဘဲ ဒီမိုးရှင်းဖြစ်နေပြီ
လိုက်ပြုပြင်ခိုင်းလည်း အောင်မြင်မြင် မမြင်မြင် လူမုန်းခံရမယ်
ဒါကြောင့် အဲဒီကားကို မစီးဘဲ ဆန္ဒပြပါ
ဒို့က တီဗီ မကြည့်ဖြစ်တော့ လိုင်းလေး သိချင်ပါတယ် .. ရှောင်သင့် ရှောင်ရအောင်လို့
နောက်ပြီး ကော်ဖီ မကြိုက်ဖူးလို့ ပြောရင် လက်ဖက်ရည် ပြောင်းပေးမှာလား မေးကြည့်ချင်လို့
ကော်ဖီမသောက်တတ်တဲ့သူဆို ဘာလဲ အအေးပြောင်းတိုက်မှာလား
အမယ်ခုဆိုရင် မိန်းကလေးတွေအတွက် အလုပ်မရှားတော့ဘူး။ လေယာဉ်မယ်လိုပဲ ကားမယ်တွေလည်း လျှောက်လို့ရနေပြီလေ…. Elite တို့လို ကားတွေက ကားပေါ်မှာ ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကောင်မလေးတွေတောင် ပါလာနေပြီလေ…. နောက်ဆို ကားမယ်တွေလျှောက်လို့ရနေပြီနော်……
ကားမယ် ကားမယ် …
မီဒီယာထဲက ဒါမျိုး များများအော်ပေးမှပဲ … အပြိုင်ဆိုင်သာ လုပ်လာကြတာ .. သူတို့က နည်းနည်းမှ အမြတ်လျှော့ပြီး အနာမခံချင်ကြဘူး… ကာစတန်မာတွေကိုဆီကပဲ အဆီရရ ၊ အနှစ်ရရ အမြတ်ထုတ်ချင်နေတုန်း … အဲ့ဒီ ယာဉ်လိုင်း နာမည်ပါရေးသင့်ပါတယ် …
Consumer Rights Group တွေထူထောင်ပြီး စားသုံးသူတွေကို ကလိမ်ကျတဲ့ ဒီလိုအပြုအမူတွေကို ဆန့်ကျင်သင့်ပြီ။
နေပြည်တော်ကိုသွားတုန်းက JJ နဲ့ စီးဘူးတယ် ၀န်ဆောင်မှု၊ဆက်ဆံရေး အကုန်ကောင်းပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ စီးသွားတဲ့ ကား လမ်းမှာ ခဲနဲ့ အထုခံရလို့ မှန်ကြီးတစ်ချပ်ကွဲသွားတာကို (အခုတစ်လော ခေတ်စားလာတဲ့) ကားပေါ်မှာပါတဲ့ ယာဉ်မယ်လေး ဖြေရှင်းသွားတာ၊ ကြန့်ကြာသွားရတဲ့ အချိန်တွေ အတွက် ခရီသည်ကို ပြန်တောင်းပန်တာ အရင်က မြန်မာပြည်မှာ တစ်ခါဘူးမှ မရဘူးတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေပါ ၊ သူတို့ ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုအပေါ် ခရီးသည်တွေရဲ့ အမြင်ကို သိပြီး ကောက်ရိုးမီး မဟုတ်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ကို ဆက်ပေးစေချင်တာရယ် တခြားလိုင်းတွေလဲ အားကျပြီး လိုက်လုပ်နိုင်ဘို့ အခမဲ့ ကြေငြာပေးတာပါ
ဟုတ်ပါတယ် နေပြည်တော်-ရန်ကုန်သွားနေတဲ့ ကားတွေလည်း ဈေးတက်မယ်လို့ ပြောသံကြားပါတယ်..၁၀၀၀ တက်မယ်တဲ့ ကော်ဖီနဲ့မုန့်ကျွေးဖို့ပါတဲ့..ဒါပေမယ့် သူတို့ကတော့ ဈေးတက်ရတဲ့ အကြောင်းကို ရှင်းပြမှာ မဟုတ်ပါဘူး..ဒီတိုင်းပဲ တိုးတောင်းမှာပါ..ပြီးမှ ကော်ဖီ အလကားတိုက်တဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့
(31.8.11) ရက်နေ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာထဲမှာ ကော်ဖီ နဲ့ မုန့် ကျွေးမယ်လို့ ကြော်ငြာထားတဲ့ ကားဂိတ် မှာ (နေကြယ်မင်း) နေပြည်တော်-ရန်ကုန် ကားဂိတ်ပါ။
ကော်ဖီနဲ့ မုန့်ကို ၁၀၀၀ နဲ့ေ၇ာင်းစားတာပေါ့…
ကော်ဖီနဲ့ မုန့်က ၁၀၀၀ မကျပါဘူး….
ကျွန်တော် ကြားဖြတ် ကြေငြာ ဝင်ဦးမယ် ။
ရန်ကုန် မန်းတလေး ခရီးသွားမယ့် စာဖတ်သူများ အတွက် သတင်းကောင်းလေးပါ
တစ်ခြား ကားလိုင်းတွေ တော့ မသိဘူး
ကျွန်တော် သိတာ က မြတ်မန္တလာထွန်း ကား တွေ သိပ်ကောင်းတယ် ဗျို့ ။
အခု ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ ကွန်မင့် ၊ ကျွန်တော် သုံးနေတဲ့ အင်တာနက် ဆိုင် က
မြတ်မန္တလာထွန်း ကားဂိတ် က ကားပိုင်ရှင် တစ်ဦး ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင် က ပါ ။
ဘော်ဒါတွေ ပေါ့ ဗျာ
ရန်ကုန် ခရီးသွားမယ် ဆိုရင် အမြဲ သူ့ ကို ဖုန်းလှမ်းဆက် ပြီး လက်မှတ် ဝယ်နေကြပါ
30.8.2011 ည၉ နာရီ မြတ်မန္တလာထွန်း ကား နဲ့ ရန်ကုန် ကို လာခဲ့ပါတယ် ။
ကားက တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်
အဲကွန်းတွေ လဲ အေးတယ် ။ ထိုင်ခုံတွေ က လဲ ကောင်းတယ်
တစ်ချို့ ကားတွေ မှာ ကြားခုံ မဖြုတ်ထားပေမယ့် ၊ ကြားခုံ လူမတင်ဘူး
ထိုင်ရတာ လဲ သက်တောင့်သက်သာ ရှိတယ် ။
တစ်ခုံ ကို ခေါင်းအုံးအသေးလေး တစ်လုံးစီ လဲ ပေးထားတယ်
တီဗီ က လဲ ဖလက်တီဗီ ကြီး ဖြစ်သွားပြီ ။ ကားတိုင်း မှာ ပါပါတယ် ။ ( လက်မ ၄၀ ကျော်မယ် ထင်တယ် )
မန်းတလေး က ဖူဒို ကိတ်မုန့် ဆိုင် က “ mocha ” ကိတ်မုန့် တစ်လုံး နဲ့“ blue mountain ” တစ်ဘူး ပေးတယ် ဗျ ။ ကိတ်မုန့် က တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ် ။ အောက်ထစ် ၅၀၀ ကျပ် ခန့် တော့ တန်ဘိုး ရှိမယ် ။ လမ်းမှာ နေပြည်တော် နားက ၁၁၅ မိုင် ၊ ဖီးလ် မှာ ခဏနားပါတယ် ။ မနားခင် ၊ စနိုးတာဝါ တစ်ထည် ရယ် ၊ သွားတိုက်တံ နဲ့ သွားတိုက်ဆေး ဘူးသေးသေးလေး ပေးပါတယ် ။
အဲဒါပြီး တောက်လျှောက်မောင်းတာ ၊ မနက် ၆ နာရီ မထိုးခင် ၁၀ မိနစ်လောက် ၊ အောင်မင်္ဂလာ ကားကွင်း ကို ရောက်ပါတယ် ဗျာ ။
ဒါကတော့ ခရီးသွားမယ့် စာဖတ်သူတွေ အတွက် အတွေ့ အကြုံလေး ကို ပြန်ဝေမျှပေးတာပါနော် ။
အဲ အရေးကြီး တဲ့
ကားလက်မှတ်ဖိုး ကျန်ခဲ့တယ် ဗျာ
ကားလက်မှတ် က တစ်စောင် ကို ၁၀၄၀၀ ကျပ် ပေးရပါတယ် ခင်ဗျာ
အငတ်ဇာတ်ခင်းကြပြန်ပြီ ကားကုမဏီ လူပါးဝသည် လွန်လွန်းပါသည် မွဲကြပါစေသတည်း
ခုမှတွေ့လို့ ခုမှ မန့်လိုက်ပီဗျာ …
ဘယ့်နှယ့် ၀န်ဆောင်မှုတဲ့ …ထွီ ….
၀န်ဆောင်မှု ဆိုတဲ့ စာလုံးကို သေချာရော နားလည်ရဲ့လား မသိဘူး ..
နိုင်ငံတကာမှာတော့ ၀န်ဆောင်မှု service ဆိုတာနဲ့တင် မလုံလောက်လို့
(အားလုံးက service ကောင်းကြတာကိုး …သူက ကော်ဖီတိုက်ရင် ငါကအအေးတိုက်တယ်
ဆိုတာမျိုး …customer က ကိုယ် ကြိုက်တာရွေးယုံပဲ …) value-added ဆိုတာမျိုးတွေ
လုပ်လာရတယ် ….တန်ဖိုးတွေ ထပ်ပေါင်းထည့် တယ်ပေါ့ဗျာ ….
service ဟာ ကြေညာ(ကြော်ငြာ)ထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှု လို့ဆိုရင်
value-added ဟာ မကြေညာ(ကြော်ငြာ) ထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှု
လို့ ဆိုရမှာဖြစ်တယ် … (၀ယ်ချင်လို့ သွားမေးရင်တော့ ဒါတွေ သည်လို လုပ်ပေးပါတယ် လို့တော့
ပြောပြတယ်ဗျ …သူ့ကိုတော့ ကြော်ငြာအနေနဲ့ သုံးလေ့ မရှိဘူး ..)
Customer Rights Group တွေဖော်ဆောင်ဖို့တော့ ထောက်ခံတယ်ဗျာ ..
တကယ်ဖြစ်သင့် ရှိသင့်တာပါ media အနေနဲ့လည်း ဒါမျိုးတွေ ဖော်ထုတ်ဖို့ အားပေးပါသည်
ကျနော်တို့လည်း လက်လှမ်းမီသလောက် လုပ်ကြတာပေါ့ …
အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ၀န်ဆောင်မှုက ညံ့ ဈေးက ပိုတောင်း ဆက်ဆံရေးကမပြေလည်
လူပိုကတင် ပြီးတော့ …ကယ်ရီကရိုက်သေး ….